Owen Hargreaves oo si weyn u ammaanay saameynta uu Bruno Fernandes ku yeeshay Man United – Gool FM
Owen Hargreaves oo si weyn u ammaanay saameynta uu Bruno Fernandes ku yeeshay Man United
(Manchester) 11 Mar 2020. Ciyaaryahankii hore khadka dhexe kooxda Manchester United ee Owen Hargreaves ayaa si xoogan u ammaanay saameynta uu yeeshay xiddiga reer Portugal ee Bruno Fernandes.
Owen Hargreaves ayaa ka hadlay saameynta uu Bruno Fernandes ku leeyahay ciyaartoyda inteeda kale, wuxuuna carrabka ku adkeeyay in xiddigaha Fred, Matić iyo Martial ay si wanaagsan saameyn ugu yeelatay qaab ciyaareedkooda imaatinka Bruno Fernandes.
Hargreaves ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Manchester Evening News” wuxuu ku sheegay:
“Matić wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican la shaqeyntiisa, sidoo kale Fred iyo Martial, wuxuu noqday mid si weyn u caawiya dhanka weerarka, runtii qof walba wuu ku fiican yahay isaga”.
“Waxaan u malaynayaa inuu qaatay darajada hoggaaminta, taas oo ah mid muhiim ah, si adag ayuu uga shaqeeyaa marxalad kasta, waxayna u badan tahay inuu sameeyo wax ka fiican waxa ay qof waliba ka rajeeneysay”.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha PSG iyo Borussia Dortmund ee tartanka Champions League oo la shaaciyay
Kooxaha PSG iyo Atletico Madrid oo u gudbay wareega siddeed dhamaadka UCL, kaddib markii ay garaaceen Liverpool iyo Borussia Dortmund… +SAWIRRO